Military lap-dog Wirathu: The Monk Behind Burma’s “Buddhist Terror” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှ မြင်ကွင်းတခုဖြစ်ပါသည်
Burma’s Ominous Political Debate over Ethnicity »
Military lap-dog Wirathu: The Monk Behind Burma’s “Buddhist Terror”
Tags: Asia, Aung San Suu Kyi, Buddhism, Buddhist, Burma, Maung Zarni, Myanmar, Rohingya
This entry was posted on June 26, 2013 at 9:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Military lap-dog Wirathu: The Monk Behind Burma’s “Buddhist Terror””
June 26, 2013 at 9:25 am | Reply
၁။ အဲ့ဒီ သင်္ဃန်းခြုံပြီး သူတပါး ဘာသာကို အမနာပ စွတ်စွဲဟောကြားပြောဆိုနေတဲ့ အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေကို လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့များ ထိရောက်စွာ ရှုံ့ချဖူးရဲ့လား။
၂။ ဒီလိုပဲ လူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ သူတပါးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီပါဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သများများကိုရော ထိရောက်စွာဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကို ဒီလိုမျိုးဖိအားပေဖူးသလား။
၃။ ဒီလိုပဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသူတွေ အပေါ်မှာ မတော်မတရားလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှု မရှိတဲ့အပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားပေးတောင်းဆိုဖူးသလား။
ကျနော်တော့ ” those word will make more tension between buddhists and Islamists in Myanmar.” ဆိုတဲ့အရေးအသားကို ပေါ့ပေါ့လေးဖတ်သွားရဲတဲ့ sign ထိုးခဲ့ကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားလို့မဆုံးဘူးဗျာ။